उपेन्द्रको तनाव झनै बढ्यो, राजनीतिक जीवननै जटिल मोडमा ! - Compaq News
उपेन्द्रको तनाव झनै बढ्यो, राजनीतिक जीवननै जटिल मोडमा !
काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति जटिल मोडमा आईपुगेको छ। अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि उनी पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परेका छन् ।
जसपाको २६ सदस्यीय कार्यकारिणी समितीमा अहिले उनको पक्षमा मुस्किलले ५ जना मात्रै खुलेका छन् । उनको विपक्षमा २० जना पुगिसकेको सोही समितिका एक सदस्यले बताए। पार्टी विभाजनअघि ५१ सदस्य रहेको जसपा कार्यकारिणी समितिमा महन्थ ठाकुरसहितका नेता वाहिरिएपछि हाल २६ जना सदस्य छन् ।
उपेन्द्र यादव विरुद्धको मोर्चा वावुराम भट्टराईले सम्हालेका छन् । पछिल्लो समय अशोक राईले समेत बाबुरामलाई साथ दिएको बताईन्छ। बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्तिको समूह र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी समूहका नेताहरू सबै एकै ठाउँमा छन् । उनीहरूलाई उपेन्द्र यादव समूहका इस्तियाक राई, प्रदीप यादवलगायतले समेत साथ दिएका छन् । जसका कारण अध्यक्ष यादव निरिह वनेका छन्।
अशोक राई अहिले मौन रहे पनि निर्णायक बेलामा बाबुरामकै पक्षमा उभिने उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि अशोक खुलेर उपेन्द्रविरुद्ध लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । बावुराम पक्षले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। जसपाको कार्यकारिणी बैठकले यादवसहित संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अशोक राईलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर यादव एक्लैले निर्णय गर्न थालेपछि उनको अधिकार कटौती गर्ने समेतका कुराहरु अगाडि आएका छन्।
सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम यादव एक्लैले पठाएको र राष्ट्रिय सभाका लागि उमेदवारको चयन पनि उनी एक्लैले गरेको भन्दै जसपा भित्र ब्यापक विरोध छ। उपेन्द्रले जसपा विभाजनका बेलामा साथ दिएका पूर्व राजपा पक्षधर नेतालाई समेत समेट्न नखोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले एकता प्रक्रियाको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको वताईन्छ।
यादवले आफुखुसी निर्णय गर्न थालेपछि तीन अध्यक्षको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवाज पनि पार्टीभित्र उठेको जसपाका कार्यकारिणी सदस्यहरुले वताएका छन् । तर, यादवनिकट नेता योगेन्द्र यादवले भने अब जसपामा दुई वा तीन अध्यक्ष नरहने र पार्टी महाधिवेशनले एकल अध्यक्ष चयन नगरेसम्म विधानको व्यवस्थाअनुसार उपेन्द्रभन्दा माथिल्लो वरीयतामा बाबुरामलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने वताएका छन् ।
उपेन्द्रको निरंकुश कार्यशैली, नेताहरूसँग सल्लाह नगरी आफूखुसी निर्णय गर्ने र सीमित जातीय घेरामा मात्र रहने स्वभावका कारण यादव एक्लिएको नेताहरूको भनाई छ। माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचपछि कार्यकारिणी बैठक बसेर यसको टुंगो लगाउने तयारी छ।
पार्टीको बहुमत पक्ष वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुने अवस्थामा पार्टीभित्रका कतिपय विवाद थाती राख्ने पक्षमा थियो । तर, सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले वैशाखमा चुनाव नगर्ने सहमति जुटाएपछि अब जसपाको विवादलाई वैधानिक ढंगले हल गर्न उपेन्द्रमाथि दबाब बढाइने नेताहरूले बताएका छन् ।